SIDEE LOO GOOYAA BEGONIA, WAA SUURTOGAL IN LA XOQDO DHIRTA IYO SIDA LOO SAMEEYO HABKA SI SAX AH SI MARKAA KA DIB UBAXA GEEDKA BILAABMA? - GURI, GURI
Begonia waa warshad qurux badan oo lagu kori karo guriga, balakoonka iyo beerta. Qaar badan oo ka mid ah beeralayda novice ma yaqaan sida loo saxo begonias - nidaam iyada oo aan taas oo aan macquul ahayn in ay koraan ubax.
Begonia waxay u baahan tahay daryeel ka dhow bilowga koritaanka. Geedku wuxuu si dhaqso ah ugu filan yahay laamaha, iyo haddii aadan xakamaynin geeddi-socodka xilligii loogu talagalay, awoodaha awoowayaashu waxay geli doonaan laamaha, oo aan ku jirin caleemaha iyo taajka.
Xoqitaanka ayaa la sameeyaa iyadoo loo eegayo qaabka la doonayo. Begonias, kuwaas oo caleemaha ay gaareen 10 cm, waa in sidoo kale la gooyaa oo ka sarreeya buro sare. Ka dib markii manjooyin si habboon loo sameeyay laba asbuuc ka dib caleemaha dhinaca soo baxaya ayaa bilaabmaya.
Waa maxay manjooyin?
Mid ka mid ah sifooyinka dhirta ayaa ah kobaca aan xadidnayn ee jiritaanka nafaqooyinka lagama maarmaanka u ah carrada. Waqti ka dib, ubaxyada gudaha ayaa lumiya soo jiidashada sababtoo ah koritaanka laamaha, waxay noqdaan kuwo jilicsan oo istaagaan si ay u farxaan isha. Laamiyayaashii hore waxay lumiyaan xooggooda oo waxay ka qaataan casiirka yar yar, iyaga oo ka hortagaya inay koraan.
Wixii dib u soo kabashada iyo dayactirka begonias isticmaalaan manjooyin - saarista caleemaha qaarkood iyo xaddididda koritaanka kuwa cusub.
Ka goynaya baalasha dheeraadka ah waxay hagaajinaysaa muuqaalka, waxay kicisaa koritaanka caleemaha dhalinyarada, waxay kuu ogolaaneysaa inaad isku dheelitirto qaybaha anteenada iyo dhulka hoostiisa. In dhirta ubax, gooyaa waxay ka caawisaa inay sameeyaan taajka ubax, ka saar ubax dheeraad ah, ama xitaa xoqin peduncle si ay u ilaaliyaan midnimada. Gardarrada way ka duwan tahay in caarada yaryar ee caleemaha la saaro.. Marka kalyaha (apical) kelyaha la jeexo, waxaa loogu yeeraa "sariiro" dabacsan.
Qanjareynta waxaa loo isticmaalaa in lagu kordhiyo laanta geedka, iyo manjooyin waxaa loo isticmaalaa in lagu noolaado oo la sameeyo taajkii.
Xididaadda begonias waxaa la sameeyaa marka aysan jirin suurtogalnimo ah manjooyin, tusaale ahaan, dhirta aadka u yar.
Duurka dhalinyarada weli aan sameeyay caleemo jir ah oo u baahan in la gooyo. Faroodku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad abuurto taajkii qaabka la doonayo.
Noocyada dalaggu waxay u baahan yihiin manjooyin maxaa yeelay waxay u muuqdaan inay koraan oo yareeyaan caleemo.
Sida loo takhaluso caleemaha aan loo baahnayn ka hor iyo ka dib ubax?
Markaad ka fekereyso sida loo yareeyo begonia, waxaa muhiim ah in la xusuusto in dhammaan noocyo aan soo saarin manjooyin iyo qallajin. Waxaa jira noocyo aan u baahnayn nidaam (tusaale, Royal Rex).
Gooyo la sameeyay dillaac. Waa in aanad jarin laanta maqaska iyo sidoo kale jebiyaan - dhaawacyada noocan ahi faa'iido uma yeelan doonaan begonias.
In caleemaha ornamental jarjar caleemaha ubax.
Gooyo waa la sameeyaa sida laamuhu u fidsan yihiin.
Marka daryeesho noocyo dameeraha, dushooda si joogto ah ayaa loo jarayaa.
Krona wuxuu bilaabaa inuu sameeyo isla markiiba ka dib iibsashada dhirta.
Labada hababba waxa la sameeyaa ka hor inta aan ubaxin ama isla markiiba.
Waa qasab in meesha laga saaro caleemaha ubaxa qallajinta iyo caleemaha qalajinta (oo ku saabsan sababta ay begonias uga baxeen leexshay iyo waxa loo baahan yahay in la sameeyo, halkan ka akhriso).
Ha samayn wax isku mid ah tallaalka iyo manjooyin - laba walbahaar ayaa dhibaato u geysata ubaxa.
Waxaa lagu talinayaa in marka hore gooyaa geedka, sugto bilowga koritaanka caleemaha lateral, oo kaliya ka dib markii beerka cusub galay ciidda cusub. Daaweynta transplantation sidoo kale waa la samayn karaa guga hore ka hor bilowga koritaanka firfircoon., iyo ka dib markii muddo ah la qabsashada si ay u jaraan caleemaha aan loo baahnayn iyo aan la aamini karin.
Ha iska tuurin afuufka kaadida kadib. Tani waa qalab aad u fiican oo loogu talagalay begonias. Si looga hortago wixii dhibaatooyin ah ee sii kordhaya iyo daryeelidda warshad, waxaan kugula talineynaa in aad naftaada kala barato qalabka kale:
Tilmaamaha talaabo-tallaabo ee loogu talagalay begonias rooting qolka.
Sifooyinka hagaagsan ee foosha ee guriga.
Qaab-dhismeedka Qaab-hawleedka Cusbooneysiinta. Daryeelka ka dib qaabsocodka.
Talooyin iyo khiyaamo si aad u sameyso xiga haddii uu ilmuhu yaraado. Noocyada diyaarinta baraarujinta.
Sida loo abuuro dhalashada indoor-ka, sidaas awgeed waxay ahayd qurux iyo caafimaad leh?
Ma jiidi karaa?
Gardarrada waxaa lagu fuliyaa guga ka hor ubax, ama isla markiiba ka dib ubax ka hor dhamaadka xagaaga.
Nidaamka waxaa lagu sameeyaa maqnaasho fiiqan ama saldhig. Gardarrada waxaa lagu samayn karaa gacmaha, laakiin tani waxay dhaawici kartaa afkoda.
Caleemaha waxaa ka mid ah kuwa ugu yar iyo kuwa aan dugaagga ahayn.
Ku dhaji dusha sare ee caleemaha ilaa kowaad ee sare ee burooyinkoodii lateral - sida caadiga ah ma aha wax ka badan 2-3 cm.
Ka saarida laamaha ubaxyada ubaxyada
Wixii jiilaalka wanaagsan ee ubaxyada begonias ee jiilaalka. (oo ku saabsan sababta ay u dhalatay ubaxu ma baro iyo sida loo gaaro burooyinkeeda quruxda badan, waxaad ka heli kartaa halkan). Marka ugu horeysa waxaa la fuliyaa marka dhirta gaaro height ah 8-10 cm.
Caarada waxaa la jarjaray si kor loogu qaado koritaanka burooyinkooda dambe. Manjooyin labaad ayaa la sameeyaa koritaanka 12-15 cm for branching. Waxaa lagu beddeli karaa qanjaruufo.
Wakhtigan, taajka ubaxa mustaqbalka waxaa la aasaasay. Manjooyin dheeraad ah waxaa loo fuliyaa sida caleemaha yaraynayaa oo qaan gaar ah. Mararka qaarkood caleemo ubax ah ayaa la gooyaa muddo dheer iyo weliba ubax badan. Krona si joogto ah u khafiif ah, ka saara caleemaha jir ah iyo ka baxsan, dhalinyarada - jiidayo laanta.
Gooyo jiilaalka waa in lagu fuliyaa begonias tuberiyo, noocyo kale - at ay u go'aamiyaan beeraha. Goobaha jiilaalka ayaa kuu oggolaanaya inaad sameysid geedo badan oo ubax ah.
Waxaan soo bandhigi doonaa daawashada fiidiyowga ku saabsan ka saarista saxda ah ee laamiyada curonia:
Sidee loo daryeelaa ka dib qaabsocodka?
Si looga hortago in cudurku galo boogta, qaybaha waxaa lagu daaweeyaa qoryo la jajabiyey ama kaarbajiye ah, ash. Mararka qaar goobaha gooyuhu waxay daboolaan maalmo badan oo ay la socdaan madaxa cagaha. Ka dib markii la gooyey geedka wuxuu u baahan yahay waqti nasasho gaaban.. Dheriga oo leh curonia ayaa hoos loo dhigaa - waxaa la dhigaa qaybta hoose ee guriga ama la ilaaliyo daahir. Tirada iyo inta jeer ee waraabka ayaa hoos u dhacaya.
Nidaamka waraabka ayaa si tartiib tartiib ah dib loogu soo celiyay kadib markii caleemaha dhinaca jaban. Marka dib loo soo celiyo qaabka loo waraabiyey, warshadu waxay u baahan tahay quudinta. Laguma talinayo in tan la sameeyo xilliga jiilaalka, waxaa fiican in la quudiyo gabadha guga guga iyo xagaaga. Buuxinta maaha mid u qalma, sababtoo ah hordhaca nafaqada dheeraadka ah waxay bedeshaa pH (acidity) ee ciidda. Bacriminta yaryar ee nafaqada ayaa ku haboon.
Gooyadu waa nidaam lagama maarmaanka u ah abuuritaanka baadiyaha caafimaad leh iyo qurux badan.. Hawlgalku ma jiro wax adag, oo korriiste xajin karo ayaa qaban kara. Iyada oo habka saxda ah ee manjooyin iyo qanjaruufo, isagoo tixgelinaya kala duwan iyo xilli, waxaad heli kartaa warshad weyn, faraxsan indhaha sanado badan.